Ciidamada xasilinta caasimadda oo howlgallo ka fuliyay degmada Yaaqshiid | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidamada xasilinta caasimadda oo howlgallo ka fuliyay degmada Yaaqshiid
Ciidamada xasilinta caasimadda oo howlgallo ka fuliyay degmada Yaaqshiid
Howlgalkaan oo ay Ciidamada xaslinta Caaasimadda Xaley ka sameeyeen Xaafadda Juungal ee Degmada Yaaqshiid ee Gobalka Banaadir ayaa ahaa mid lagu xaaqiijeneyay Amniga maqaalada Muqdisho si looga hortago dhibaatooyinka ay bulshada u maleegayaan Maleeshiyaadka Al-shabaab.
Ciidamada ayaa la arkayay iyagoo baariya Guryaha ku yaal Xafadda Juungal, isla markaan si fiican ula dhaqmiyay daweynaha ku sugnaa deegaanka ay ka socotay howlgalka, Waxaana ka qeyb qaadanayay Maamulka Degmada Yaaqshiid oo uu ugu horeeyo Guddomiyaha Degmadaas
Boqolaal qof oo u badan dhallinyaro ayaa lagu qabtey howlgalka, waxaana la isku keeney barxad ku taal Xaafadda Juungalka ee degmadaas halka inta badan la sii daayay kadibna markii lagu sameeyay bartaan.
Guddomiyaha Degmada Yaaqshiid Axmed Maxamed Xasan oo la hadley Warbaahinta howlgalka kadib ayaa ka warbixiyay sida uu dhacey howlgalkaa, isagoo ugu baaqey bulshada iney la shaqeyaan ciidamada Amniga.
Ciidamada xasilinta Caasimadda ayaa inta waxa ay howlgal ka sameeyay Degmooyinka Gobalka Banaadir, kaaso oo wax badan ka badaley Amniga Caasimadda Dalka, iyagoo sii laba jibaarey Howlagalada ka dhanka ah Maleyshiyaadka Al-shabaab.
Previous articleFrancisco Madeira” Dhalinyarada katirsan Al-shabaab haka faaiideystaan fursadda Dowladda Soomaaliya oo haka soo baxaan Al-shabaab”
Next articleRa’iisul Wasaare Khayre oo dalbaday in Soomaaliya laga qaado xayiraadda Hubka saaran